आहा ! यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ, यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु (भिडियो हेर्नुहोस) – Cn Chautari
फागुण १, २०७८ आइतबार 554
आहा यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ,।
यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, myanmar in nepali भिडियो तल हेर्नुहोस ! यो समचार पनि पढ्नुहोस् २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द कोभिड १९ संक्रमण रोकथामका लागि बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९सीसीएमसी० ले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारदेखिनै लागू हुने गरी शैक्षिक संस्थाबारे यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने मेला महोत्सव बन्द रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।
सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ । माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरु पार्क, फिल्म हल, रेष्टुरेन्ट र सपिङको लागि मलमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । सीमानाकामा कोभिड परीक्षणलाई व्यापक तुल्याउने, खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउने ।
निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ । पछिल्लो केही दिनयता नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले अरु क्षेत्रभन्दा ।
पहिले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।आहा !! यस्तो छ बर्माको नेपाली गाउँ, यति राम्रा छन नेपाली युवतीहरु, mya nmar in nepali भिडियो तल हेर्नुहोस ! यो समचार पनि पढ्नुहोस् ! भिडियो हेर्नुहोस ।
Prevश्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु म, कोही केटा छन् भने सम्पर्क गर्नुहोस्
Nextसाउदी अरब बाट नेपाली कामदारको माग ! फ्री मै जान पाइने यति धेरै तलब